के हो एमिकस क्युरी? यस्तो छ इतिहास उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरुले आफ्नो वकिलहरु राखेर बहस गर्छन् भने, जसलाई विरुद्व बनाइएको हुन्छ उनीहरुले पनि अधिवक्ता वा महान्यायधिवक्ता, वरिष्ठ अपधिवक्ता राखेर बहस गराउँछन्। जटिल प्रश्नमा संसारभरको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ। सोही अध्ययन अदालतमा पेश हुन्छ। अदालतलाई दुवै पक्ष उस्तै र सही लाग्न सक्छ। न्यायधीशहरुलाई कुन पक्ष सही वा बहस ठीक हो भन्ने कुरामा अन्याेल वा निर्णय गर्न जटिल लाग्न सक्छ। न्यायाधीशहरु आफैँमा सक्षम हुन्छन्। तर सक्षम हुँदा हुँदै उनीहरुले जटिल प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा तटस्थ विज्ञहरुको राय बुझ्न चाहन्छन्। अनिता श्रेष्ठ
फेसबुकमा गाँसिएको कल्पना र कृष्णको जिन्दगी सिध्याउने सम्बन्ध
शनिबारको रात काठमाडौंको आकास रोइरहेको थियो। साउने झरीले निस्पट्ट थियो रात। पूरै सुनसान थियो। कुकुर भुकेकोसम्म आवाज नसुनिने गरी। घरका बार्दलीबाट झर्ने पानीको आवाजमात्रै आइरहेको थियो, सबैका कोठाभित्र, प्याट्प्याट पुट्पुट! त्यही मौका छोपेर राजधानीको गोंगबुमा एउटा विभत्स घटना हुँदै थियो। गणेशस्थान चोकमा रोल्पाका ४६ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहराको घाँटी रेट्दै थिइन् कल्पना मुडभरी (पौडेल)। अंगदबहादुर सिंह
‘नानी, त्यो बेला त्यस्तो भएको रहेछ, मलाई याद भएन वा याद भए पनि मैले ध्यान दिइनँ, तेरो मन दुखेको भए सरी भन्देको भए त भइहाल्थ्यो नि!’ गजेन्द्र बाेहरा
सशस्त्रको खरिदमा आइजी खनालको विशेष मोह
प्रबन्ध शाखाले गर्नुपर्ने नियमित खरिदारीमा संगठनप्रमुखको ठाडो संलग्नता देखिएको छ। सदाचार नीति अपनाउने संस्थाको प्रमुखले खरिदारीमा सकेसम्म आफूलाई अलग राख्न चाहन्छन् र सम्बद्ध शाखालाई नै उत्तरदायी बनाउँछन्। खिलानाथ ढकाल
सरकारले लकडाउनको अवधिमा यस्ता विकासे परियोजनालाई चारदेखि छ महिना शून्य अवधि मानेर ठेक्काको म्याद थप्न सकिने निर्णय नै गरेको छ। उसै पनि ढिलो काम गरिरहेको शैलुङलाई सरकारको यो निर्णयले थप राहत मिल्ने देखिएको छ। निर्देशनालयका अनुसार शैलुङलाई पटक-पटक ताकेता गरिँदै आएको छ। तर, शैलुङको काममा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। खिलानाथ ढकाल